Isicelo - China Beihai Fiberglass Co., Ltd.
I-fiberglass inikeza izinzuzo zamandla aphakeme, isisindo esincane, ukumelana nokuguga, ukumelana okuhle kwelangabi, ukwahlukanisa kwe-acoustic kanye nokushisa, ngakho-ke kusetshenziswa kabanzi emkhakheni wokwakha nowokwakha.
Izicelo: ukhonkolo oluqinisiwe, izindonga ezihlanganisiwe, amawindi wesikrini kanye
umhlobiso, imigoqo yensimbi ye-FRP, indawo yokugezela nezindlu zangasese, amachibi okubhukuda, izihloko zekhanda, amaphaneli okukhanyisa emini, amathayili e-FRP, amapaneli eminyango, njll
I-fiberglass inikeza izinzuzo zokuqina kobukhulu, ukusebenza okuhle kokuqinisa, isisindo esincane nokumelana nokugqwala, ngakho-ke kuyinto ekhethwayo ngezinto zokwakha ingqalasizinda.
Izicelo: izidumbu zebhuloho, amatheku, izakhiwo zokwakha ezisemanzini, umgwaqo omkhulu kanye namapayipi.
I-fiberglass inikeza izinzuzo zokufakwa kukagesi, ukumelana nokugqwala, ukufudumeza ukushisa nesisindo esincane, ngakho-ke kuncanyelwa kakhulu emkhakheni kagesi nogesi.
Izicelo: amabhodi wesekethe aphrintiwe, izigqoko zikagesi ezisebenza ngogesi, amabhokisi e-switchgear, ama-insulators, amathuluzi okuvikela, ama-motor end caps nezingxenye zikagesi, njll.
4.Chemical Corrosion Ukumelana
I-fiberglass inikeza izinzuzo zokumelana nokugqwala okuhle, umphumela omuhle wokuqinisa, ukuguga nokulwa nelangabi, ngakho-ke isetshenziswa kakhulu emkhakheni wokumelana nokugqwala kwamakhemikhali.
Izicelo: imikhumbi yamakhemikhali, amathangi okugcina, ama-anti-corrosive geogrids namapayipi.
Uma kuqhathaniswa nezinto zendabuko, imikhiqizo ye-fiberglass inezinzuzo ezisobala ekuqiniseni, ukumelana nokugqwala, ukumelana nomhuzuko nokukhuthazela okushisayo, futhi ingahlangabezana nezidingo zezimoto zesisindo esincane namandla amakhulu. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo kwezokuthutha kuyanda.
Izicelo: imizimba yezimoto, izihlalo nemizimba yesitimela esinejubane elikhulu, isakhiwo semikhumbi, njll.
6. Indawo Yasemkhathini
Izinhlanganisela eziqinisiwe ze-fiberglass zinezinzuzo zesisindo esincane, amandla aphakeme, ukumelana nomthelela kanye nokwehla kwelangabi, okunika amandla izixazululo eziningi ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile emkhakheni we-aerospace.
Izicelo: ama-radomes endiza, izingxenye ze-aerofoil nezansi zangaphakathi, iminyango, izihlalo, amathangi kaphethiloli asizayo, izingxenye zenjini, njll.
7. Ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo
I-fiberglass inikeza izinzuzo zokonga ukushisa, ukufudumeza okushisayo, umphumela omuhle wokuqinisa kanye nesisindo esincane, okwenza kube yinto ebalulekile kumandla omoya nasekuvikeleni ubunjiniyela.
Izicelo: ama-wind turbine blade nama-hoods, qeda abalandeli, ama-geogrids, njll.
I-fiberglass inikeza izinzuzo zesisindo esincane, amandla aphezulu, ukuguquguquka kokuklama okuphezulu, ukucubungula okuhle kakhulu, i-coefficient ephansi yokungqubuzana nokumelana nokukhathala okuhle, ngakho-ke kusetshenziswa kabanzi emikhiqizweni yezemidlalo nezokungcebeleka.
Izicelo: amatafula wethenisi wetafula, ama-battledores (ama-badminton rackets), amabhodi e-paddle, amabhodi eqhwa, amaqembu wegalufu, njll.